Mumwe mushandi akafa, vatatu muchipatara muSpain mutsaona yenyukireya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Spain Kuputsa Nhau » Mumwe mushandi akafa, vatatu muchipatara muSpain mutsaona yenyukireya
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Spain Kuputsa Nhau • Sustainability News • Technology • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Pakanga pasina kuburitswa kwemwaranzi kubva pachiitiko ichi, sekureva kwechirimwa nevakuru venzvimbo
Ascó nuclear power plant muCatalonia, Spain
Chirimwa cheAscó chaive chaferefetwa nezve kubuda kwemwaranzi paUnit 1 reactor muna Mbudzi 2007.
Mayuniti manomwe ekudzimisa moto uye mota ina dzekukurumidzira dzakamhanyiswa kuAscó nuclear power plant in Catalonia, Speini manheru ano nenguva dza7 pm nguva yemuno mushure mekudonha kukuru kwekabhoni dhaikisaidhi kwataurwa panzvimbo iyi.
Mumwe wevashandi vakabatwa afa, uye vatatu vakaendeswa kuchipatara nekuchimbidza mushure mekunge izvo zvinofungidzirwa nevakuru venzvimbo yaive mari yakawandisa mumudziyo wekudzivirira moto.
Vashandi vekukurumidzira vakachengetedza nzvimbo yacho uye vakaburitsa vaive vafa.
Nzira yekudzivirira moto pachirimwa "yakatambura nekudonha kweCO2 iyo yabata vanhu vana," zviremera zveCatalan zvakazivisa.
Vashandi vatatu vakapona pakudonha pari zvino vari muchipatara chiri pedyo neMóra d'Ebre.
Pakange pasina kuburitswa kwemwaranzi kubva pachiitiko ichi, sekureva kwechirimwa pamwe nevakuru venzvimbo.
Iyo Ascó chirimwa mukati Catalonia yakanga yaferefetwa nekuda kwekudonha kwemwaranzi paUnit 1 reactor muna Mbudzi 2007, zvakakonzera kupfurwa kwemukuru wayo.